GTHS(Monywa)လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ ၊ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ နှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ ကျင်းပခြင်း | TVET Myanmar
GTHS(Monywa)လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ ၊ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ နှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ ကျင်းပခြင်း
(၂၀၁၈ -၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ် ၊GTHS(Monywa) ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ ကို (၂၁ . ၃ .၂၀၁၉) မှ (၂၃ . ၃ .၂၀၁၉) ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး (၂၃ . ၃. ၂၀၁၉) ညနေပိုင်းတွင် major အလိုက် အကောင်းဆုံး ရရှိသူများ နှင့် (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ် အတွက် ပညာရည်ချွန်ဆုရရှိသူများ အား ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ ၊သက်မွေးပညာ နှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော် မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးဇော်မင်း နှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ပြင်ပလုပ်ငန်းရှင်များ၊ GTHS(Monywa) ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် ဆရာ/ဆရာမ များ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် GTHS(Monywa) ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးသော်ဇင်မျိုးမှ ကျောင်းအကြောင်းနှင့် ပြိုင်ပွဲအကြောင်း ရှင်းလင်း‌ြေပာကြားခဲ့ပြီး လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ အကောင်းဆုံးဆု ရရှိသူများနှင့် (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ် အတွက် ပညာရည်ချွန်ဆူရရှိသူများ အား ဆုများအသီးသီး ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး၊ ဆုရပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းများအား တက်ရောက်သူများက လှည့်လည်ကြည့်ရှု၍ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။